डा.केसीको समर्थनमा रिले अनशन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
डा.केसीको समर्थनमा रिले अनशन
दमक — आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा बुधबारदेखि दमकमा रिले अनशन सुरु भएको छ । स्वतन्त्र युवा अभियानको अगुवाइमा दमकको गणतन्त्र चोकमा बिहान ८ बजेदेखि अनशन सुरु भएको हो ।
बुधबार डा. सूर्यनारायण शाह, डा.नीरञ्जन बोगटी, डा.बीपी कर्ण, सुरेश सुब्बा, शेरबहादुर भट्टराई, रेगिना भट्टराई, मन्धरा पौडेल, डा.जयप्रसाद ढुंगाना र पदम भण्डारीलगायत रिले अनशनमा बसे । युवा अभियानका संयोजक मेची पुत्रले डा.केसीको माग सम्बोधन नगरेसम्म रिले अनशन जारी राख्ने बताए ।
डा.केसीको मागमा समर्थन जनाउँदै युवा अभियानले गत असार २७ गतेदेखि दैनिक दबाबमूलक प्रदर्शनसमेत गर्दै आएको छ । ‘डा.केसीका मागहरूले मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मनपरीतन्त्र रोक्नेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धनीदेखि गरिब जनतासम्मको पहुँच सहजै पुग्नेछ । त्यसैले सरकारले माग पूरा गर्नुपर्छ,’ अनशन बसेका शेरबहादुर भट्टराईले भने ।
प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०७:३३
डा. केसी जुनसुकै बेला अचेत हुन सक्ने
काठमाडौँ — डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन तत्काल नरोकिए उनलाई गुमाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने चेतावनी चिकित्सकले दिएका छन् । ‘हामी उनको स्वास्थ्यबारे जानकारी दिन नियुक्त आधिकारिक व्यक्ति होइनौं तर २–३ दिनमा अनशन रोकिएन भने उहाँ कोल्याप्स हुने स्थितिमा पुग्न सक्नुहुन्छ,’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आईसीयू विभागसँग सम्बन्धित एक चिकित्सकले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँको अत्यन्त जटिल अवस्थाबारे आधिकारिक व्यक्तिलाई हामीले जानकारी दिइसकेका छौं ।’
वार्ताको मध्यस्थता गरिरहेका प्रा. केदारभक्त माथेमा बुधबार आमरण अनशनको २६ औं दिन त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डा. गोविन्द केसीलाई भेट्दै । तस्बिर : कविन अधिकारी
उनका अनुसार डा. केसीले उपचार गराउन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । ६१ वर्षीय डा. केसीले १५ औं आमरण अनशन सुरु गरेको बुधबार २६ दिन पुगेको छ । ‘जुनसुकै बेला अचेत बन्न सक्ने अवस्था छ,’ ती चिकित्सकले भने, ‘यस्तो भयो भने भविष्यमा दु:खद स्थिति निम्तिन सक्छ ।’ प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहले समेत डा. केसीको अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएको बताइन् ।
उनका अनुसार डा. केसीलाई बुधबार साँझसम्म तीनपटक बान्तासमेत भएको छ । मंगलबारदेखि नै मुटुको चालमा समेत गडबडी देखिएको छ । छाती दुखाइ एकदमै बढेको छ भने रगतमा सुगरको स्तरमा कमी छ । शरीरमा व्यापक मात्रामा इलेक्ट्रोलाइट, लवण आदिको असन्तुलनसँगै रक्तचापसमेत घटेको छ । यो अवस्थामा पुगेको बिरामीलाई तुरुन्तै आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने डा. सिंहले बताइन् ।
प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०७:३१